नातिनी तिमी अधेरीको जुन बन्नु - Radio Katha
मूलपृष्ठ » Story » नातिनी तिमी अधेरीको जुन बन्नु
नातिनी तिमी अधेरीको जुन बन्नु
2011-10-23 अन्जली स्याङतान / डाँडीगुराँस,सिन्धुली / सिन्धुली
जङगलको छेउमा कटेरो थियो । हेर्दा डाँडामा भएपनि फाँटको बारीबाट कटेर त्यहाँ पुग्नु पथ्र्यो । त्यो घरमा शिव थापा एकजना बुढो मानिस बस्थ्यो । घरको छेउछाउमा बढेमानको राते, कलुवा, माले अनि दुइचार ओटा दुधालु गाइ सधैं बाधेकै हुन्थ्यो । म लगायत मेरा साथीहरु कहिलेकाहि खेल्न बाहनामा त्यहाँनिर पुग्थ्यो । हामी सबै उसलाई मेमे भनेर बोलाउथ्यो । तामाङ्गको घनाबस्ती माझ बास रहेकाले हामीले बोलेको सजिलै सुन्थ्यो अनि हामीलाई हाम्रै भाषामा उत्तर फर्काउथ्यो ।
म अनि बिस्तारै हुकिदै गएँ । मेरो पनि घाँस दाउरा गर्ने बाटो त्यतै बनाइदिनु भयो । मेरो बाबाले ठयाक्कै त्यही मेमेको घर भएर मेरो माथिल्लो बारी पुग्नुपथ्र्यो मैले । जब म २ कक्षामा पढ्ने भएँ म उहाँलाई शिव सट्टामा शिवे मेमे भन्न थालँे । मेमेले पनि मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो । म सानै भएकोले मेमेले दिनु भएको दुध दहिमा नै मेरो सन्तुष्टी भरिन्थ्यो । अनि त्यो भन्दा माथि म बाबा ममीसँगै खुसीसाथ रहन्थे । मङसिर पूर्णिमाको खीर र कुखुराको मासुले मेरो भाग सजिलै पाउथ्यो । म पनि घरकी जेठी छोरी दाजुभाइ मेरो नभएकाले मलाई बाबा ममीले पनि धेरै माया गनुहुन्थ्यो । मेमेको माया अनि बाबा आमाको न्यानो मायाले मलाई राम्रो पढ्न र काम गर्न प्रेरणा दिन्थ्यो ।
त्यही वर्ष म २ कक्षाबाट ३ मा पुगँे । म ३ कक्षामा प्रथम भएँ । घरमा बाबा आमा त्यो खबरले धेरै खुसी हुनु भयो । म पनि खुसी हुँदै बाबा आमाको पछाडी त्यही उकालो हुँदै माथिल्लो खर्कजाँदै थिएँ मेमेमाथि पाखाबाट नै खुसीले चिच्याउनु भयो । जब म मेमेको नजिक जाँदै थिएँ मेमे झन खुसी भएको मलाई महसुस भयो । म लाजले भुतुकै भएँ । मैले सुनाउनु पर्ने खबर मेमेले अगाडि नै थाहा पाउनु भएछ । ‘मेरी नातिनी तिमी ठूली होइन ज्ञानी मान्छे हुनुपर्छ मेमेले भन्नुभयो ।’ मेमे रामायण पढ्नुहुन्थ्यो । त्यसैले आशिर्वादमा एकदुई वटा मैले नबुझ्ने सस्कृतका एक दुई वटा श्लोक भन्नुभयो । अनि आमा बाबा तिर फर्कदै भन्नु भयो, ‘नातिनीलाई राम्ररी पढाऊ ।’ केहीबेरको गफगाफ पछाडि बाबा आमा उकालो लाग्नु भयो म पनि पछिपछि लागेँ । यसरी नै दिनचार्य बित्यो तलमाथि गरेर । बाजेको घरमा रोकिएर गफगाफ गर्नु र खर्कमा चढेर गाई बाख्रा चराएर बाबा ममीलाई सहयोग गर्नु त मेरो कर्तव्य नै थियो । म पनि ठूली हुँदै गएँ । बाजे भने त्यही घरको आगनमा निधाएर मुजाहरु थप्दै आफ्नै गाईगोरुको स्याहारमा दिनहरु काटदै थिए । बासका ढुग्रामा भरीभरी दुध दुहुनो अनि ढुग्रामा नै दही जमाएर मन्दनीले ठेकीमा मदेर घिउ निकालेर बेच्नुहुन्थ्यो । घिउले बजारमा राम्रो स्थान र चर्चा पाएको थियो । बजारमा मात्र होइन गाउँघरतिर पनि शिवे बाजेको घरको जस्तो मिठो गाइको घिउ त कही पाइदैन भनेर गफचल्थ्यो । ठूला मान्छेले कुरा गर्दा म छेउमा बसेर सुन्थँे ।
म ५ कक्षा पनि पास भएँ । कक्षा ५ मा पनि प्रथम भएँछु । परीक्षाको नतिजा एककान दुईकान गरी मैदान भरियो । बाबाआमा सबैजना खुसी हुनु भयो । म पनि धेरै खुसी भएँ । त्यही बेला मलाई एकासी शिवे बाजेको यादा आयो मास्तिर खर्क जाने निहुँमा म बाजेलाई भेटन गएँ । म बाजेको छेउमा पुग्दा बाजे ख्वाक्क ख्वाक्क खोक्दै हुनुहुथ्यो । मैले बाजेलाई विस्तारै नमस्कार गरें । बाजे खुसी हुँदै मलाई पुलुक्क हेर्नु भयो । मैले सबै खबर सुनाएँ । बाजे झनै खुसी भएर भन्नु भयो, ‘नातिनी तिमी अधेरीको जुन बन ।’
मलाई त्यो दिन धेरै कुरा बाजेलाई सोध्नु थियो । बाजेले पनि मलाई खुसी साथ सोधन भन्नु भयो । सबै भन्दा पहिले मैले हजुर आमाबाट प्रश्न शुरु गर्दा उहाँले बीचमै कुरा काटेर भन्नु थाल्नु भयो म राजग्रहको मान्छे मैले आइमाईको हातबाट दिएको खानेकुरा खायो भने मृत्यु हुन्छु । बाजेले त्यसो भन्दा, ‘म छक्क परेँ ।’ बाजेले फेरी कुरा जोडनु भयो, ‘नातिनी मैले आइमाईले दिएको हातबाट खाना खानु हुँदैन, अनि धुरी छाएको घरमा बस्नु हुँदैन बुझयौं ।’ झन म झसङ्ग भएँ अनि म धुरीतिर फर्के । घरको साच्चिकै धुरी थिएन । धुरीको नाममा त्यहाँ दुईचार वटा खावा अनि आफू सुत्ने माथि एकदुई वटा प्लाष्टिक राखेका थिए । यो भन्दा अगाडि मैले बाजेको अनुहार र बाजेले दिनु भएको दहि दुधको ख्याल गर्थे । अरु कुरामा वास्ता केही थिएन । बाजेलाई मेरो बाल मन विचारले जति सके सम्झाए तर बाजे सम्झिनु चाहानु भएन ।
मैले पनि नजिकैकये प्रावि विद्यालय छोडनु पर्ने भयो । मन त गहुगो नै थियो तर त्यहाँ कक्षा ५ सम्म मात्र थियो । म नजिकैको माविमा भर्ना हुन गएँ । घरबाट करिब १ घण्टाको लामो बाटो पार गरेर तल झरेपछि बाजेसँग मेरो भेटघाट पातलीदै गयो । बेलुका विद्यालयबाट आउँदा ढिला हुने भएपछि मेरो माथिल्लो खर्क जाने क्रम र बाजेसँगको भेटघाट हुन छाड्यो । बेलाबेलामा एक्लैहुँदा म बाजेको घरको धुरी सम्झिन्थेँ कसरी असार साउनको झरी कटछ बाजेको ? बाजेलाई के पानीले भिज्दैन, चिसो लाग्दैन ? यी सबकुरा मनमा खेलीरहँदा मेरो दिमागमा नजिकको तस्बिर छलङ्ग आउथ्यो । यति ठूला हृदय भएका मानिसका पनि किन यति साधुरा दिमाग । म कहिलेकाही मनमनै गाली गर्थे बाजेलाई ।
वार्षिक समारोहको दिन म विद्यालयमा धेरै व्यस्त थिएँ । सबैजना पुरस्कार पाएर खुसि देखिन्थ्यो । झन म धेरै खुसी थिएँ । हातभरी पुरस्कार कहिले घर पुग्नु र बाजेलाई भेटौं भइरहेको थियो । अविर र टिकाले अनुहार भरी रातै भएको थियो । म लगायत अरु साथीहरुलाई अभिभावकहरुले पनि धन्यवाद दिँदै थिए । म विद्यालयबाट हतार–हतार घर आइपुगेर बाजेको घरतिर हेरँे त्यही बेला माथि घुम्तीबाट एक ठूला मान्छे हतारीदै अगाडि बढेको देखेँ । एकछिन पछि अरु मानिस पनि भेला भएको देखेँ । मैले मनमनै सोचे काही बिरामी भएको होकी भनेर म पनि उत्तै ध्यान दिएँ । त्यो मानिसको हुल नजिक नजिक हुँदै हाम्रै छेउ आइपुग्यो । नजिकैको ठूलाबालाई सोधे, के भयो ? को हो ? भनेर उत्तर आयो, ‘शिवे गएछ ।’ मेरो हातमा भएको पुरस्कार भुइमा खसेको थाहै भएन । अनि खुसीसीमा हराएछ, म त बेहोस नै भएछु । म एक्कासी छागाबाट झरे झैं भएछु । मेरो आँखाबाट आँसु सँगै म स्वर निकालेर रुन थालँे । म सबैलाई बिन्ती गर्दै मेरो बाजेलाई बचाउ भनेर चिच्याउनु पुगेछु । पछि होसमा आएँपछि थाहा पाएँ । आँसुका थोपामा उही शिवे बाजेको तस्बिर देखिन थाल्यो । त्यही आँसुका थोपामा तस्बिर बोल्न थाल्यो, ‘नातिनी तिमी अधेरीको जुन बन्नु ।’